Rakotonavory Jimmy Hilarion: mpikaroka, mpanakanto, mpiaro ny kolontsaina malagasy | NewsMada
Rakotonavory Jimmy Hilarion: mpikaroka, mpanakanto, mpiaro ny kolontsaina malagasy
Rakotonavory Jimmy Hilarion. Mbola vaovao amin’ny sofin’ny maro io anarana io, saingy anisan’ireo tanora malagasy manan-talenta samihafa, samy mifamatotra amin’ny kolontsaina sy ny zavakanto malagasy ka tokony hampahafantarina. Manao fikarohana manokana na “doctorant” amin’ny mozikan’ny foko na “ethnomusicologie” Rakotonavory Jimmy Hilarion. Miompana amin’ny “bali manjofo”, avy any amin’ny faritra tsimihety, ny “thèse” ataony, kendreny ho vita amin’ny taona 2020.
Mozika ny fiainany ary havanana amin’ny fitendrena zavamaneno maro sy ny fihirana ny tovolahy. Io talentany io no nahatonga azy hamorona ny tarika Lejim415, izay mivoy ny gadon-kira avy any Mandritsara, faritra Sofia, misy azy. Nanamarika ny tsingerintaona faha-15 nijoroany ny tarika, tamin’ny taon-dasa. Maro ny hetsika sy ny seho an-tsehatra notanterahin’izy ireo, tamin’izany.
Mbola hitohy amin’ity taona ity izany, toy ny “cabaret”, eny amin’ny Restaurant Le Menabe eny Ivato, rahampitso alina. Ankoatra ny fitondrana an-tsehatra ireo gadona manavanana ny tarika, hasehon-dry Lejim koa ny fahaizany miangaly ireo hira ankafizin’ny tanora ankehitriny.
Mijoro, miaro ny kolontsaina malagasy i Jimmy Hilarion ary asongadiny hatrany izany ao anatin’ny tononkirany. “Tsy manambady papoety” ny lohatenin’ny rakikira vaovaony.
“Ny tiako hambara, io resaka saribakoly ampiasaina amin’ny filàna ara-nofo io, izay efa tena malaza any amin’ny mandroso. Izaho, tsy mankasitraka azy ity, na eo aza ny fandrosoana, satria tsy hisy intsony ny tena fanambadiana sy ny hasin’izany. Mifanohitra amin’ny fihavanana io”, hoy izy, nanazava.